Download FACETIME NY PC Window 7, 8 & Window 10 🤑
Download FACETIME NY PC
Desambra 22, 2019 ny Facetime Guide Leave a Comment
Hello Facetime Lover! Ve ianao sahiran-tsaina ny fomba ahafahanao mametraka facetime amin'ny Window PC tahaka Facetime for Window 7, Facetime for Window 8 na raha te-télécharger sy hametraka facetime ao amin'ny varavarankely 10 rafitra fandidiana avy eo manaraka ity lahatsoratra ity?
azonao facetime amin'ny solosaina
Indro ato amin'ity lahatsoratra ity, Efa nomeko misy soso-kevitra tsotra sy ny fitaka, izay hamela anao hampiasa ny toerana tena fampiharana facetime ny asa eo am-baravarankely sehatra.
Raha mampiasa varavarankely laptop sy te- Download facetime ho an'ny Windows 7 laptop ary ny zavatra rehetra dia samy rakotra ato amin'ity lahatsoratra ity fotsiny manaraka ny dingana tsotra izay omena etsy ambany.
Facetime amin'ny Apple Inc.. dia iray amin'ireo tena ifandrimbonana, ilaina sy ny fara-tampony videotelephony rindrambaiko izay nanan-kery izao tontolo izao. Ao amin'io vanim-potoana nomerika, ny olona rehetra te hijanona mifandray fiaraha-monina amin'ny hafa.
Noho ny fanampian'ny Face fotoana, Mahaliana dia afaka manao na lahatsary sy ny feo miantso ny hitoetra fifaneraserana amin'ny manodidina. Noho ny fandehan'ny fotoana, ny fampiasana ny FaceTime fampiharana dia nitombo izaitsizy teo fitaovana Apple mpampiasa.
Ity fampiharana no mifaninana amin'ny olon-kafa tahaka ny mamela ny fitarihana ny Avo Indrindra-kalitao sy ny feo Video antso. Araka ny fikarohana, ny ankamaroan'ny olona manana fitaovana Apple anisan'izany iPad, iPhone, Mac, ary iPod dia mampiasa FaceTime hijanona mifandray amin'ny tena manokana sy izao tontolo izao orinasa.
voalohany, Face Time i fotsiny fitaovana natao ho an'ny Apple. Fa noho ny fampisehoana mahomby sy ny tinady, ankehitriny, ianao koa dia afaka télécharger FaceTime for PC. Tsy izany mahaliana? Ny fomba fifandraisana efa niova tanteraka ankehitriny.
Dia aleon'ny olona manao zavatra bebe kokoa lahatsary sy ny feo miantso, fa tsy e-mail, na mail. Miaraka amin'ny fanampian'ny manan-tsaina ity ny tena marina rindrambaiko Time, dia afaka mora foana na iza na iza miteny na mahita mipetraka na aiza na aiza maneran-tany.
Any amin'ny tany sasany toy ny Etazonia sy Angletera, ny ankamaroan'ny olona mampiasa fitaovana Apple izay mahatonga azy io ho mahasoa azy ireo mifandray amin'ny hafa foana fitaovana Apple mpampiasa.
Fa amin'ny firenena sasany, mpanjifa misafidy ny hampiasa ny PC noho ny isan'andro ny asa nomerika. Ary hitondra aina ho an'ny mpampiasa izany, ity lahatsoratra ity dia hitarika ny fomba mahomby mampiasa ny iOS rindrambaiko amin'ny solosaina manokana. Izany dia manome fahafahana anao hifandray amin'ny olon-kafa hafa izay mampiasa fitaovana Apple.
Koa foana mamaky ity lahatsoratra ity raha te-télécharger, hametraka sy mihazakazaka ny implausible fampiharana ny marina amin'ny Personal Time Computers.
1 Download ary Hametraka Facetime App Fa PC:
2 Ahoana no Download sy Hametraka FaceTime for PC?
2.2 Endriky ny FaceTime App amin'ny PC:
Download ary Hametraka Facetime App Fa PC:
matetika, Apple manan-in-nanorina fampiharana ny FaceTime rehetra anisan'izany ny fitaovana iPhones, iPods, iPads, ary Mac. Fa tsy afaka mahazo izany safidy eo amin'ny PC. Noho izany tanjona, tsy maintsy mametraka Face Time amin'ny alalan'ny fampiasana ny emulator. Ity dingana downloading mamihina ny dingana manaraka:
Voalohany, tsy maintsy maka ny iPadain emulator. Afaka manana azy io amin'ny alalan'ny fampiasana ny nomena rohy: ipadian.net
Rehefa avy downloading ny iPadian emulator, misokatra ny rakitra ary hametraka izany araka ny fepetra sy ny toromarika nomena.
dia, indray mandeha ny iPadian emulator dia nametraka, dia afaka manokatra azy io izao, ary Hiditra amin'ny alalan'ny fanomezana ny vaovao ilaina. Io dingana mila ny Apple ID sy teny miafina.
Ankehitriny ianao dia afaka manana ny FaceTime fampiharana. Fa raha tsy afaka mahita izany dia afaka misintona mora foana izany miaraka amin'ny fanampian'ny ny Apple App Store fandaharana.
Farany, hiditra misy fifandraisana amin'ny Apple izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampiasana ny mailaka, mpampiasa ID na maro, ary manomboka manao feo na lahatsary antso. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fanindriana ny lahatsary na ny telephonic kisary nomena ao amin'ny fampiharana.
Ahoana no Download sy Hametraka FaceTime for PC?
Safidy iray hafa mampiasa facetime amin'ny PC vitsivitsy taorian'ny dingana tsotra dia toy izao manaraka izao:
Facetime amin'ny PC azo atao rehefa avy downloading Bluestacks amin'ny PC.
Afaka maka bluestacks fampiharana avy amin'ny vohikala ofisialy bluestacks.com.
Rehefa avy misintona Bluestacks, hametraka izany ary indray mandeha no mamarana ny Download, haverina velomina ny PC.
Mila minitra vitsivitsy mba initialize taorian'ny fandefasana Bluestack fampiharana. Aza hanery akaiky, dia mety hiteraka ny kolikoly ny rindrambaiko.
Raha vao ny PC Restart, misokatra bluestacks fampiharana eo amin'ny rafitra.
Mandehana any amin'ny sakafo ary tsindrio eo amin'ny fivarotana kilalao fampiharana.
Rehefa avy manokatra ny Play Store, Tsindrio eo amin'ny fikarohana sy ny karazana Facetime ary avy eo dia ho an'ny Windows Download facetime PC.
Mba hametraka ny Facetime avy hatrany, tsindrio Open na Run, ary avy eo dia manaraka ny toromarika eo amin'ny efijery. *Raha toa ianao nahatonga ho mpitantana tenimiafina na ny fandraisana ho mpikambana, ampidiro ny teny miafina na hanome ny fandraisana ho mpikambana.
Mba hametraka ny FaceTime tatỳ aoriana, tsindrio Save, ary avy eo dia misintona ny fametrahana rakitra ao amin'ny solosaina. Rehefa vonona ny hametraka ny FaceTime, Kitiho in-droa ny rakitra, ary avy eo dia manaraka ny toromarika eo amin'ny efijery. *Izany no safidy azo antoka kokoa, satria afaka banjino ny fametrahana antontan-taratasy ho an'ny virosy eo anatrehanao miroso.
Hanomboka FaceTime amin'ny PC.
Fomba fampiasana Face Time amin'ny PC?
Taorian'ny fametrahana ny toerana tena fampiharana ny Face Time amin'ny PC, tsy maintsy manaraka ny dingana fototra mba hanomboka hampiasa azy io:
Rehefa avy downloading sy fametrahana, hanomboka ny FaceTime App. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fanindriana ihany eo amin'ny fampirimana.
Rehefa hanomboka izany fampiharana voalohany, tsy maintsy miditra ny mailaka sy ny telefaonina ID isa. Manampy mba hahatonga ny ID izay azo ampiasaina amin'ny mpampiasa hafa mba hifandray anao. Raha toa ka efa manana ID, Afaka mampiasa azy io ianao raha tsy izany dia afaka manao ny iray vaovao ao anatin'ny segondra vitsivitsy
Taorian'ny dingana fidirana, dia hahita ny Fikarohana tontonana eo amin'ny ilany havia ny FaceTime fampiharana. Tontonana ity dia ahitana ny lisitry ny anaran'ny olona rehetra izay te-hifandray aminao.
Fantaro ilay olona izay te-manombo-dresaka. Ho an'ny fampiasana FaceTime amin'ny PC, afaka ihany no hifandray misy olona raha fantatrao ny adiresy mailaka.
Rehefa afaka izany,, tsy maintsy miandry ny dial-up fivoriana.
Ary avy eo rehefa mpampiasa hafa handray ny antso, ianao nametraka rehetra mba hiaina tsara ny tsara indrindra lahatsary na feo antso.
Rehefa vita ny resaka, dia afaka tsindrio fotsiny ny bokotra Call Farany hampitsahatra ny antso.
Endriky ny FaceTime App amin'ny PC:
Videotelephony niavaka io rindrambaiko manana tombontsoa maro ary manolotra vokatra miavaka ho ny mpanjifa. Ny sasany amin'ireo endri-javatra ireo ny mahaliana:
Izany fampiharana io irery ihany lahatsary natao ho an'ny antso. Ny hevitra fototra dia ny hahatonga ny olona mifandray ka hataoko ho akaiky kokoa noho ny fanampian'ny lahatsary fangatahana.
Izany dia natao tsara rindrambaiko mba afaka mahazo ny fanapahan-kevitra faran'izay tsara ho an'ny lahatsary antso. Ny vaovao tsara dia Face Time ankehitriny fanohanana 1080p amin'ny Personal Computers.
To mankafy izany, ny rafitra dia tsy maintsy manana in-nanao fakan-tsary. Ary raha tsy manana ny fakan-tsary dia afaka mividy ny Webcam.
Ny Face Time ihany koa ny manome widescreen 16:9 lafiny. Izany dia manome traikefa tena tsara antso rehefa te-hifandray amin'ny mpampiasa hafa.
Noho ny kalitao sy ny fahombiazana, fampiharana izany dia heverina fa tsara indrindra raha ampitahaina amin 'ny mpifaninana ao anatin'izany ny mpitondra hafatra, Skype, Google Duo sy ny maro hafa.
Tsara teny antso:
Ankoatra ny antso lahatsary iray miavaka endri-javatra, dia azonao atao ny mampiasa ny safidy antso peo. Izany koa tena tsara feo kalitaon'ny ijerena ny elanelana
Sary in Sary Feature:
Izany dia manampy anao mba hijery tsara kokoa ny maneho ny sary kely eo amin'ny lafiny fa aoka ianareo sahirana amin'ny antso.
User- Friendly interface tsara
Iray hafa manararaotra FaceTime mifaninana eo amin'ny PC dia, dia manana piderana mpampiasa-namana interface tsara. Tena tsotra, malama, ary mora. Na iza na iza dia afaka mampiasa sy hahatakatra izany araka ny tokony ho tena. Izany no antony ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tanteraka amin'ny fitiavana ny FaceTime App ny Apple.
Fa ny fiainana manokana sy ny fiarovana, afaka hanakana misy fifandraisana. Raha misy olona nananihany na mampahatezitra anao, rehetra tsy maintsy atao dia ny hanakana ny olona amin'ny miditra ao amin'ny andian-tsoratra ny anarany-list
Ankoatra izany, Face Time ihany koa ny manome endri-javatra tsara tarehy hafa
• Afaka tonga mora foana ny naniry hifandray amin'ny alalan'ny fampiasana fotsiny ny Apple ID na ny laharana an-tariby.
• Afaka mahazo antso amin'ny alalan'ny vondrona FaceTime. Mahaliana, fampiharana izany mahatonga anao ho afaka hifandray amin'ny niakatra ho any 32 mpampiasa miaraka
• mba hiala voly sy ny fifandraisana resaka, dia afaka mampiasa taratasy fametaka sy Animoji
• Mandritra ny lahatsary antso, dia afaka mampiasa ny fakan-tsary tamin'ny fomba roa
Azonao atao ny mampiseho azy ireo ny tavanao amin'ny alalan'ny fampiasana ny anoloan'ny fakantsary ny PC na
Azonao atao ny mampiasa indray fakan-tsary mba hamela ny namanao hahita izay mijery
• Mba hifandray amin'ny olon-tianao haingana, dia afaka manao ny lisitry ny Favorites.
• Afaka mahazo Face Time amin'ny alalan'ny Wi-Fi na na ny angona fifandraisana
• Azonao ampiasaina ity rindrambaiko amin'ny fiteny samihafa arakaraka ny ny safidinao
Manantena aho fa efa tanteraka ilay lahatsoratra ny tsipiriany rehetra mila mampiasa facetime amin'ny PC. Raha toa ka manana fanontaniana, no lazaina ao amin'ny fanehoan-kevitra boaty. Izaho no hiteny hamaly ny fanontaniana, ary tapa-kevitra ny fanontaniana.
Can mampiasa Apple Watch for Music Tsy Misy Phone
Download FACETIME HO AN'NY MAC
FACETIME HO AN'NY iPad
Skype NY ANDROID